TTSweet: နမော်နမဲ့၊ နမူးနထိုင်း နှင့် at the same time
Posted by T T Sweet at 11:45 AM
lovely Ju Ju..
နမော်နမဲ့နဲ့နမူးနထိုင်းဆီက ဂျူဂျူလေး နမော်နထိုင်းဒါမှမဟုတ် နမူးနမဲ့များဖြစ်နေမလား :P
ဲJu Ju လေးက တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်.... မေးကြည့်ပေးပါဦး အခုရော -ီး အနေတော်လေးပဲလား လို့လေ ..... :))))
Ju Ju is so sweet. I love her so much. Pls give my love to her.
ဖိုးတုတ် March 21, 2012 at 1:33 PM
ရယ်လိုက်ရတာ၊ မဆွိရေးသမျှထဲမှာ ဒီပို.စ်က အကောင်းဆုံးပို.စ်
rose of sharon March 21, 2012 at 3:04 PM
ဂျူဂျူလေးအစောကြီးထလိုက်ရတယ်...သနားပါတယ် ... :))
laughable post until my stomach pain..... :D
I love all your family.
မောင်သီဟ March 21, 2012 at 6:39 PM
susu March 21, 2012 at 8:00 PM
အကျီ်ေ ပြာင်းပြန်ခဏခဏဝတ်မိလို့အရှက်ကွဲ‌ပေါင်းများ‌နေလို့ပါ..။းP
Anonymous March 22, 2012 at 4:35 AM
Shu mawa thameelay Juu Juu so cute.
ဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ၊ ရေးတတ်တဲ့ မဆွိပဲ၊
အော်ရီသွားတယ်.. ဂျူဂျူလေး ချစ်စရာလေး
San San Htun April 8, 2012 at 11:53 AM
ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ တီဆွိရေ..ဂျူးဂျူးလေးက ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်..